HETSIKY NY KANDIDA MIISA 25 TETSY MAHAMASINA : Tsy nisy nihaino, zara raha nahazo olona
Nitsefotra tanteraka. Mbola nikasa ny hanao famoriam-bahoaka lehibe tetsy Mahamasina indray ireo kandidà miisa 25 manohitra ny fifidianana omaly. Toy ny mpitoriteny an’efitra anefa izy ireo. 31 octobre 2018
Tsy nisy nihaino fa azo isaina ireo olona tonga teny an-toerana nanatrika ny hetsika nataon’izy ireo.
Hatreto dia tsy mety mahatsapa ny lesoka amin’ilay fitakiana ataon’izy ireo mihitsy ireo kandidà miisa 25. Mikiribiby hatrany ireto farany hanafoana ny fifidianana izay efa voatondro fa hotanterahina ny 7 novambra ho avy izao ho an’ny fihodinana voalohany. Nanao tohy vakana anefa ny fanehoan-kevitra ary na ny filohan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Céni) aza dia nilaza ombieny ombieny fa tsy azo ahemotra intsony ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana amin’ny heriny androany.
Omaly, rehefa tapitra ilay fe-potoana 72 ora nanateran’izy ireo ilay fehin-kevitra tany amin’ireo filohan’ny andrim-panjakana sy tompon’andraikitra mpikarakara ny fifidianana dia niroso tamin’ny fanaovana hetsika tetsy Mahamasina. Raha ny filazan’ireto kandidà ireto dia hetsika manakatra ny lanitra mihitsy ilay atao kanefa toy ny fijerena fampisehoana nataon’ny mpanakanto aza no niseho tetsy Mahamasina. Nomen’ny vahoaka lamosina tanteraka, zara raha nisy olona tonga teny an-toerana. Raha nisaina dia manodidina ny zato kanefa dia kandidà miisa 25 no niara-nivondrona nanatanteraka ilay hetsika.
Raha atao izany ny tombana dia olona miisa zato ihany no manaiky mitovy hevitra amin’izy ireo ankoatra ireo olona tonga hijery fampisehoana fotsiny. Mitombina ihany ny filazana fa tahotra ny tsy hahazo vato amin’ny fifidianana no mahatonga ireto kandidà ireto manao izay ho afany amin’ny fanoherana ny hanatanterahana ny fifidianana. Olona zato no miombon-kevitra sy manohana kandidà miisa 25 . Samy manana olona efatra avy izy 25 mianadahy manohana azy. Efa mitafy henatra tanteraka satria tamin’ilay hetsika nokarakarain’izy ireo tamin’ny voalohany no efa nomen’ny olona lamosina dia izao tsy leom-boananana niditra tamin’ny hetsika faharoa izao indray.
Efa mazava ny sori-dalana alehan’ny firenena fa afaka herinandro sisa dia hifidy izay ho filoham-pirenena hitondra an’i Madagasikara ho any amin’ny dimy taona manaraka ny olom-pirenena. Tsy misy mihemotra izany intsony, samy resy lahatra na hatramin’ny vahoaka aza fa tsy misy afa-tsy ny fifidianana irery ihany no vahaolana ho an’ny firenena ao anatin’izao krizy lalin’ny fahantrana izao.